Garoonka Brussels oo dib loo furi doono - BBC Somali
Masuuliyiinta dalka Belgian ayaa sheegay in aanay dib u furi doonin garoonka dayaaradaha ee magaalada Brussels illaa maalinta talaadada, kadib weerarkii lagu qaaday garoonkaasi qaybta laga baxo.
Suaalo ayaa la is weydiinayaa in booliiska iyo sirdoonka Belgian ay sameeyeen shaqo ku filan oo ay kaga hortagi kareen weeraradaasi is-qarxinta ahaa oo lagu dilay 31 qof.
Dhinaca kale, wargeyska Faransiiska ee, Le Monde, ayaa daabacay wax uu ku sheegay qoraalka wareysiyo booliisku sameeyeen oo si qarsoodi ah loogu gudbiyay, kaasi oo ay la yeesheen ninka ooga shakiyay weerarada Paris Saalax Cabdeslaam.
Caddaymaha uu wargeysku helay ayaa muujinaya in Saalax la tusay sawirada labada walaalaha ee sameeyay weeraradii is qarxinta saddex maalmood kadib. Wargeysku waxa uu sheegay inuu inkiray inuu yaqaan laakiin qofkii suaalaha weydiinayay aanu sii weydiin xog dheeraad ah.